निषेधाज्ञाबीच वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप रु. १० अर्बले बढ्यो, कर्जा लगानी कति ?
काठमाण्डौ । कोरोना दोस्रो लहर रोकथाम तथा नियन्त्रणका जारी निषेधाज्ञाबीच वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलन १० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। सरकारले गत वैशाख १६ गतेदेखि उपत्यका निषेधाज्ञा जारी गरेको छ। यसबीच उपत्यकाबाहिर अधिकांश जिल्लामा निषेधाज्ञा जारी भइसकेको छ। निषेधाज्ञाका बेला बैंकहरुका सीमित शाखाहरमा खुलेका छन्। यस्तो अवस्थामा...
किन घट्यो वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप ? कर्जा लगानी भने बढ्यो
काठमाण्डौ । पछिल्लो एक सातामा वाणिज्य बैंकहरु निक्षेप घटेको छ भने कर्जा लगानी बढेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो एक साताको तथ्यांकअनुसार वाणिज्य बैंकहरु निक्षेप संकलन ५ अर्ब रुपैयाँले घटेको छ। जसका कारण गत वैशाख ३ गतेसम्म वाणिज्य बैंकहरुको कुल निक्षेप ३९ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा वैशाख १० गते घटेर ३९...
काठमाण्डौ । पछिल्लो केही समयदेखि वाणिज्य बैंकहरु निकै आक्रामक ढंगमा कर्जा लगानी र निक्षेप संकलन गरिरहेका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) को तथ्यांकअनुसार चैतको तेस्रो साता (चैत १४ बाट चैत २० सम्म) मा मात्रै वाणिज्य बैंकहरुबाट ३९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी भएको छ। यो चैत महिनाभरि भने बैंकहरुले ८९ अर्ब रुपैयाँ कर्जा लगानी गरिसकेका...
निक्षेप संकलनको तुलनामा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानी दोब्बर
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुको चैतको दोस्रो सातामा निक्षेप संकलनको तुलनामा कर्जा लगानी दोब्बर बढी देखिएको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) ले आज सार्वजनिक तथ्यांकअनुसार यस्तो देखिएको छ। तथ्यांकअनुसार चैतको दोस्रोसम्म बैंकले २४ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन्। जब कि कर्जा लगानी ५० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ। यो हिसाबले बैंकहरुको...
चैतको पहिलो सातामै वाणिज्य बैंकहरुबाट रु. २३ अर्ब कर्जा प्रवाह, निक्षेप कति ?
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुको निक्षेप संकलनको तुलनामा ऋण प्रवाह ह्वात्तै बढेको छ। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) का अनुसार चैत महिनाको पहिलो सातामात्रै वाणिज्य बैंकहरुबाट २३ अर्ब रुपैयाँले ऋण प्रवाह गरेका छन्। गत फागुन २८ गतेसम्म बैंकहरुले कुल ३४ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ऋण प्रवाह गरेकोमा चैत ६ गतेसम्म बढेर ३४ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ...
काठमाण्डौ । वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा लगानीमा आक्रामक देखिएका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसन (एनबीए) का अनुसार फागुनको पहिलो साताको तुलनामा दोस्रो साता बैंकहरुको कर्जा लगानी २७ अर्ब रुपैयाँले बढेको छ। गत फागुन ७ गतेसम्म बैंकको कुल कर्जा लगानी ३३ खर्ब ३५ अर्ब रुपैयाँ रहेको फागुन १४ गतेसम्म बढेर ३३ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। माघ...
काठमाण्डौ । अर्थतन्त्र चलायमान भएसँगै पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा तरलता निरन्तर दवाब पर्न थालेको छ । गत पुस मध्यसम्म २ खर्ब अधिक तरलता रहेको प्रणालीबाट पुनरकर्जामा ८३ अर्ब रुपैयाँ जाँदा तरलता ७८ अर्बमा सीमित बन्न पुगेको छ। कोभिड महामारीअघि प्रणालीमा ३ खर्बको तरलता थियो। पछिल्लो समय बैंकहरु लगानी विस्तारमा आक्रामक हुँदा तरलतामा...
महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सका नवनियुक्त अध्यक्ष शर्माद्वारा पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण
काठमाण्डौ । महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स लिमिटेडका नवनियुक्त अध्यक्ष मनोरञ्जन रमण शर्माले आज पद तथा गोपनियताको शपथग्रहरण गरेका छन्। नवनियुक्त अध्यक्ष शर्माले बीमा समितिका अधयक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालबाट बीमा समितिमा आयोजित एक कार्यक्रमबीच पद तथा गोपनियताको शपथग्रहण गरेका हुन्। कम्पनीको हिजो सोमबार सम्पन्न तेस्रो वार्षिक...